बालबालिकाको प्रशंसा गर्न चुक्नुभयो कि ? - Purbeli News
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ ०७, २०७६ समय: १४:३९:२४
काठमाडौँ / तपाईंले कहिल्यै बालमनोविज्ञानको बारेमा सोच्नुभएको छ ? उनीहरुको आनीबानी व्यवहारको विषयमा ध्यान दिनुभएको छ ? उनीहरुले गरेका गतिविधिबारे गहिरिएर सोच्नुभएको छ ? यदि छैन भने उनीहरुका क्रियाकलापबारे आजैदेखि ख्याल गर्ने बानी बसाल्नुहोस् । मनोविद्का अनुसार पाँच वर्षसम्म बालबालिकालाई आमाबुबाको न्यानो माया र साथ चाहिन्छ । तीन वर्षका बालबालिका जुनसुकै काम गर्न पनि अघि सर्छन् । चार वर्ष पुगेपछि आफ्नो सामानका लागि झगडा गर्न थाल्छन्् । पाँच वर्षको पुग्दा अरुलाई हेप्न र हेपिन थाल्छन् । उसको होडबाजी शुरु हुन्छ । साधारणतया गलत र सही के हो भन्नेबारेमा विचार गर्न थाल्छन् । यो बेलामा अरुको नक्कल गर्ने र ठूला मान्छेले जस्तै क्रियाकलाप गर्ने रुचाउँछन् ।
प्रारम्भिक बालविकासको सिद्धान्तले बालबालिकालाई गर्भावस्थादेखि आठ वर्ष हुँदासम्म विशेष महत्व दिएर उनीहरुका सर्वाङ्गीण विकासमा मद्दत पुग्ने गरी लालनपालन तथा हेरचाह गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ । यसका लागि आमाबुबा र घरपरिवारको हेरचाह आवश्यक पर्छ । प्रतिकूल वातावरणले बालबालिकाका लागि मानसिक र संवेगात्मक पक्षको विकासमा क्षति हुने र उचित ढङ्गले मनो–सामाजिक पक्षको विकास हुँदैन । घरेलु हिंसा, उपेक्षित र स्याहार नपुगेका बालबालिकामा अन्यको तुलनामा मानसिक र व्यावहारिक समस्या देखापर्छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका उपमहानिर्देशक इमनारायण श्रेष्ठ बाल क्षमता विकासमा पारिवारिक वातावरण हुनु जरुरी रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँले अझै पनि मुलुकमा प्रारम्भिक बालविकासलाई ध्यान दिन नसकेको महसुस भएको बताउँदै अब बन्न लागेको सङ्घीय शिक्षा ऐनले सम्बोधन गर्ने आशा व्यक्त गर्नुभयो ।
सेतो गुराँस राष्ट्रिय बाल विकास सेवाका अध्यक्ष पूर्वसचिव जयराम गिरीले प्रारम्भिक बाल विकासका लागि संस्थाले ‘बालमनोविज्ञान तथा व्यवहार विकाससम्बन्धी चित्रात्मक सहयोगी पुस्तिका’ प्रकाशन गरेको जानकारी दिनुभयो । पुस्तक सबैका लागि उपयोगी हुने खालको रहेको उहाँको भनाइ छ । पुस्तकको आज शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले विमोचनसमेत गर्नुभएको छ ।